Giorgio Chiellini Oo Si Layaableh Buugiisa Ugaga Hadlay Dhaawicii Mohamed Salah Ee Sergio Ramos. – Gool24.Net
Giorgio Chiellini Oo Si Layaableh Buugiisa Ugaga Hadlay Dhaawicii Mohamed Salah Ee Sergio Ramos.
Maalmihii ugu danbeeyay waxaa kubbada cagta haystay qaybo ka mid ah buug cusub oo uu qoray difaaca kooxda Juventus ee Giorgio Chiellini waxaana hadda la shaaciyay qayb aan hore loo arag oo la xidhiidha dhacdadii Sergio Ramos iyo Mohamed Salah.
Giorgio Chiellini ayaa eedayn badan kula kulmay qaybo ka mid ah buugiisa cusub kadib markii lagu eedeeyay in uu yahay mid si qaldan u fikira oo wax xun ka sheegay ciyaartoy ay isku koox ahaayeen.
Laakiin qaabka uu uga hadlay dhacdadii aduunka gilgishay ee uu Sergio Ramos ku jabiyay Mohamed Salah ee finalkii Champions League ayaa noqonaysa qodob kale oo aduunku ku qaybsami doono.
Qaybta uu Giorgio Chiellini kaga hadlay Sergio Ramos iyo Mohamed Salah ma aha qayb hore loo shaaciyay waxaana lag helay qaab sir ah oo la sii fashiliyay wixii uu dhacdadan ka aaminsanaa iyo aragtidiida shaqsiga ah.
Giorgio Chiellini ayaa Sergio Ramos ku tilmaamay difaaca aduunka ugu fiican wuxuuna qiray in Ramos aanu run ka sheegin qaabkii uu Mohamed Salah u jabiyay isaga oo tilmaamay in ay ahayd arin badheedh ah oo uu fursad ku helay si uu Salah ciyaarta uga saaro.
Dhinaca kale Giorgio Chiellini ayaa tilmaamay laba arimood oo uu Sergio Ramos gaar la yahay wuxuuna ku sifeeyay mid gaadha waxyaabo qacliga ka sareeya waxayna kala yihiin in uu saamayn aan la saadaalin karin ku sameeyo kulamada waa wayn oo ay ku jirto in uu xataa ciyaartoyda ka soo horjeeda dhaawac xun u gaysan karo.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa qaybta buuga Giorgio Chiellini ee uu kaga hadlay dhacdadii finalkii Champions League ee Sergio Ramos musiibada ugu gaystay Mohamed Salah.
Ugu horayn Giorgio Chiellini oo ka hadlaya waxa uu ka aaminsan yahay Sergio Ramos ayaa buugiisa ku qoray amaantan wuxuuna yidhi: “Isagu waa difaaca aduunka ugu fiican”.
Giorgio Chiellini oo Sergio Ramos ku eedeeynaya in uu sal fudud yahay oo aanu waxyaabaha ka sii fikirin isla markaana ay dhibaato u keento ayaa yidhi: “Waxay sheegaan in isagu uu sal fudud yahay oo ayna gabi ahaanba ahayn taatiko, oo xili ciyaareedkiiba ay qaladkiisa kaga dhashaan 8-9 gool, in uu aad u farsamo badan yahay isla markaana uu goolal dhalin karo taas oo ah wax aniga iga soo hor jeeda”.
Intaas kadib Chiellini ayaa laba dabeecadood oo uu Ramos leeyahay oo ayna cid kale la wadaagin soo bandhigay wuxuuna yidhi: “Si kastaba ha ahaatee, isagu waxa uu leeyahay laba dabeecadood oo ayna ugu dhawaan cid kale la ahayn. Isagu waxa yaqaanaa sida loo go’aamiyo kulamada waa wayn isaga oo ku soo faro galinaya waxyaabo caqli kasta ka sareeya, xataa waxa uu dhaawac u gaystaa sida shaydaanka qoyan!”.
Hadalkan ayuu Giorgio Chiellini ku xidhay dhaawacii uu Ramos u gaystay Mohamed Salah wuxuuna yidhi: “Midkii uu Salah ugu gaystay finalkii Champions League ee 2018 kii waxa uu ahaa ficil nasiib iyo xirfad leh. Waxa uu markastaba sheegaa in aanu qorshaysan, inaga oo og in u dhicitaanka sidii uu sameeyay iyo in aanu isaga u ogolaan in uu socdaa ay ahayd 9kiiba 10. Waxa uu halis galiyay jabinta gacanta xidiga ka soo horjeeday”.
Giorgio Chiellini ayaa tilmaamay in difaacyada kale ee Real Madrid ay la’aanta Ramos noqon lahaayeen sida ciyaal iskuulka oo kale wuxuuna yidhi: “Awooda uu joogitaankiisa oo kaliya ugu gudbiyaa waa cajiib. L’aanta Ramos, qaar ka mid ah Championska Varane, Carvajal, Marcelo waxay u muuqan lahaayeen ciyaal iskuul. Si deg deg ah ayay sidii hore ugu soo laabanayaan, waxayna Real Madrid noqonaysaa koox bilaa difaac ah”.
Chiellini ayaa hadalkiisa ku soo xidhay: “Haddii ay isaga ku haysan lahaayeen Bernabeu, waxaad hubaal ka dhigaysaa in ayna kooxda reer Spain guuldaro saddex gool ah kala kulanteen Ajax, waxaan sharad ku gali lahaa lacag kasta”.